Nepali Rajneeti | प्रधानमन्त्री, केपी ओली र पत्नी राधिकासँग, यति धेरै सम्पत्ति कहाँवाट आयो ? भक्तपुरदेखि,झापासम्म जग्गा कति छ जग्गा ?
प्रधानमन्त्री, केपी ओली र पत्नी राधिकासँग, यति धेरै सम्पत्ति कहाँवाट आयो ? भक्तपुरदेखि,झापासम्म जग्गा कति छ जग्गा ?
जेठ १४, २०७८ शुक्रबार ९६ पटक हेरिएको
“नेपालमा अधिकांश नेताहरूका श्रीमती ‘धनी’ हुन्छन्। नेताहरू चाहिँ आर्थिक रुपमा विपन्न। कसरी? जति–जे सम्पत्ति हुन्छ, त्यो श्रीमतीको नाममा राखेपछि अख्तियारले देख्दिैन।”
“अख्तियारले खोजी हाले श्रीमतीले कमाएको भनिदियो, सकियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पनि त्यस्तै अवस्था देखिएको छ। प्रधानमन्त्री भएपछि ओली हरेक दिनजसो अलग–अलग पोसाकमा देखिन्छन्।”
“तर, श्रीमतीभन्दा गरीव छन् प्रधानमन्त्री ओली। यसैबीच, ओली नेतृत्वको सरकारमा मन्त्रीहरूले गतमहिना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन्।”
“एमाले अध्यक्ष समेत रहेका ओलीकी श्रीमतीको नाम सम्पत्ति छ। प्रधानमन्त्री ओलीको नाममा जग्गा जमीन छैन। उनको सम्पत्ति विवरण अनुसार तलबभत्ता वापतको ४२ लाख रुपैयाँ एभरेष्ट बैंक लिमिटेडमा रहेको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख गरिएको छ।श्रीमती राधिका शाक्यको नाममा भक्तपुरदेखि झापासम्म जग्गा रहेको उल्लेख गरिएको छ। भक्तपुरको सूर्यविनायक–२ मा डेढ रोपनी जग्गामा २ तीन तले घर पनि राधिकाकै नाममा रहेको छ।”
“राधिकाकै नाम २५ लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर रहेको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख गरिएको छ। सम्पत्ति विवरणमा ओली पत्नी राधिकाले आफै कमाएको अर्थात् स्वआर्जन भनिएको छ।”
“नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशक पदबाट अवकाशप्राप्त प्रथम श्रेणीकी अधिकृत शाक्यले भक्तपुरदेखि झापासम्म कहिले जग्गा किनिन् भन्ने विषय उल्लेख छैन। यद्यपि, प्रधानमन्त्री पत्नीसँग यति सम्पत्ति हुनु कुनै नौलो विषय नभएकाे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्काे कार्यालयका एक अधिकृत बताउँछन्।” मेची महाकालीवाट